बिहान फेरी म्यासेज आयो अर्का मित्रको, झापाबाट। तपाईँको परिवारका सबै सदस्यले त भोट विश्वप्रकाश शर्मालाई दिन्छन् होला, तर समानुपातिकमा चाहिँ तराजुमा हाल्न भनिदिनोस् ल! अफिसका लागि बस चढ्न लाइनमा थिएँ । सोचेँ एकछिनपछि सिटमा बसेर म्यासेर रिप्लाई गर्नुपर्ला। फेरि म्यासेज आयो अर्कै पुराना स्कूल पढ्दाका साथीको। फोन नम्बर पनि कहाँबाट पाएछन् कुन्नि। म … हो, थाहा छ तेरो परिवारले भोट विश्वलाई गर्छ, तर समानुपातिकमा चाहिँ यसपालि सूर्यलाई गर्नु भन् है, तैले भनिस भने सुन्छन्। धुलाबारी माद्यमिक विद्यालय पढ्दाका ती मेरा बालसखा सम्झिएँ। आँखै रसाउला जस्तो भयो। बालखकालको मित्रता मरुञ्जेलसम्म रहन्छ रे! हो कि जस्तो लाग्यो। तर मित्रका कुराले एकछिन सोच्न बाध्य बनायो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २०, २०७४ ०४:३९:४७